पूर्ण धातु आतंक सीजन - - यो हुनेछ? - पालना दृश्य
पूर्ण धातु आतंक सीजन।
एक टिप्पणी छोड पूर्ण धातु आतंक सीजन on मा - यो हुन्छ?
पूर्ण मेटल आतंक अधिक पुरानो लोकप्रिय एनिमे मध्ये एक हो, जुन जनवरी २००२ मा जुलाईमा बाहिर आउँदो नयाँ एपिसोडको साथ बाहिर आउँदैछ। कहानी एक युवा मानिस भनिन्छ। त्यसोभए यो एनिम अर्को मौसममा फर्किनेछ? र हामी यो कसरी पक्का हुन सक्छौं? त्यो हो जुन हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं।
सिंहावलोकन - पूर्ण धातु Panic सीजन 5
श्रृंखला निम्न छ सुसुके सागर, एक गुप्त एक सदस्य विरोधी आतंकवाद निजी सैन्य संगठन मिथ्रिलको रूपमा चिनिन्छ, सुरक्षा प्रदान गर्ने काम सुम्पिन्छ कानम चिदोरी, एक उत्साहित जापानी हाई स्कूल केटी।
उनी आफ्ना साथीहरुको सहयोगमा चिदोरीको स्कूल, जिन्दै उच्च विद्यालयमा पढ्न जापान सर्छन् कुर्ज वेबर र मेलिसा माओ.
सामाजिक अन्तर्क्रियाको अनुभव नगरेको, सोसुकेलाई उनका स्कूलका साथीहरूले सैन्य उन्मादको रूपमा लिन्छन् किनभने उसले दैनिक परिस्थितिलाई लडाईको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दछ।
उनी चिदोरीसँग सम्बन्ध राख्छन् जसले सोसुके उनको सुरक्षा गर्दैछन् भनेर बुझेका थिए तर उनी अर्डरका कारणको कारण खुलासा गर्दैनन् किन कि चिदोरीलाई बिभिन्न स by्गठनहरूले किन लक्षित गरेको छ भन्ने कुरा उनीलाई थाहा छैन।
मुख्य पात्रहरू - पूर्ण धातु Panic सीजन 5
पूर्ण धातु Panic मा मुख्य पात्रहरु धेरै यादगार र राम्रो लेखिएको थियो। तिनीहरू मध्ये केही अवास्तविकको मूर्खको रूपमा आएका थिए यद्यपि यो एक कल्पना हो। आशा छ कि यी अक्षरहरूले सबै पूर्ण मेटल पैनिक सीजन in मा देखा पर्नेछ। हामी तलका सम्भावनाहरू पार गर्दैछौं यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्न वा पहिले नै क्यारेक्टरहरू चिन्नुहुन्न भने हामी यस अंश मार्फत जानुहुन्छ।
पहिले हामीसँग छ सुसुके सागर, एक गुप्त एक सदस्य विरोधी आतंकवाद निजी सैन्य संगठन मिथ्रिलको रूपमा चिनिन्छ, सुरक्षा प्रदान गर्ने काम सुम्पिन्छ कानम चिदोरी, एक उत्साहित जापानी हाई स्कूल केटी। उनी आफ्ना साथीहरुको सहयोगमा चिदोरीको स्कूल, जिन्दै उच्च विद्यालयमा पढ्न जापान सर्छन् कुर्ज वेबर र मेलिसा माओ.
ऊ औसत हेर्दै, अनौंठो छ र सँधै एकल स्वरमा बोल्दछ, जस्तो कि सेन्टो बाट Amagi शानदार पार्क। यसले उसको चरित्रलाई हेर्न गाह्रो बनायो र लगभग प्रकारको डरलाग्दो। ऊ पनि धेरै बोरिंग थियो। Sousuke पूर्ण धातु Panic सीजन5मा हुनेछ।
अर्को हामीसँग कानम चिडोरी छ जो प्रकाश उपन्यास र एनिमेज श्रृंखला पूर्ण धातु आतंकको डेयूटरागनिस्ट र नायिका नायिका हुन्!
उनी एक १-बर्षे हाई स्कूलको छात्र छिन जसको सुसुके सागरालाई मिथ्रिलले सुरक्षाको जिम्मा दिइयो। उनको फुसफुलाएको क्षमताको खोजीले आतंकवादी संगठनहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछ।
उनी धेरै कष्टप्रद छिन् र मलाई सहानुभूति दिन धेरै दिदैनन्। Chidori निश्चित रूप मा पूर्ण धातु Panic सीजन5मा हुनेछ।
तेस्रो हामीसँग कर्ज वेबर छ यहा उसले भाड़ेका भाडाका सिपाहीको रूपमा काम गरिसकेका छन। कुर्जले राइफलको साथ आफ्नो सीप पत्ता लगाए र दुई बर्ष भित्र मास्टर स्नाइपर भयो।
उनले अन्ततः आर्म स्लेभ पाइलटिंगको साथ आफ्नो प्रतिभा फेला पारे। यो थाहा छैन कि कसरी आर्म स्लेभ पाइलट गर्ने प्रशिक्षण प्राप्त भयो। मध्यवर्ती वर्षहरूमा, उनी ट्याग पत्रिकाको नमूना बनेका छन, सैनिकहरूका लागि प्रकाशन, अन्य चीजहरूका साथै।
मलाई लाग्यो कि उनको चरित्र ठीक छ। केहि विशेष छैन, वास्तवमा राम्रा पोखरी, ओह र ऊ स्निपर हो। ऊ पूर्ण मेटल पैनिक सीजन in मा हुनेछ।
अर्को टेलेथा 'टेसा' टेस्टारोसा छ जो अनाड़ी कप्तान र यसका निर्माता हुन् तिमी दे दान पनडुब्बी र दाना, उप कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
उनी मिथ्रिलको हुन्, एउटा आतंकवाद विरोधी निजी सैन्य संगठन हो। उनी जन्ममा अमेरिकी अमेरिकी हुन् तर उनले पनडुब्बी र सैन्य आधारहरूमा धेरैजसो जीवन बिताइन्। टेसा फुल मेटल पैनिक सीजन in मा हुनेछ।
मेलिसा माओ हो मेलिसा माओ (メ リ ッ サ ・ マ オ; मेरिसा माओ/ 梅利莎 毛, मेइ लि शा माओ) बाट एक निजी सैन्य ठेकेदार हो Mithril। उनी चिनियाँ अमेरिकी र पूर्व समुद्री छिन्।
मलाई उनको चरित्र वास्तवमै त्यति मन पर्दैनथ्यो तर मलाई लाग्छ यो त्यस्तो थियो किनकि उनले त्यति स्क्रीन समय पाइनन्। यो मलाई याद आईरहेको कुरा थियो। मेलिसा माओ निश्चित रूपमा पूर्ण धातु Panic सीजन5मा हुनेछ।
गौरोन हो गौरोन एक मास्टर प्लानर हो, र केहि गडबडी भएको घटनामा सँधै आकस्मिकता हुन्छ। मानौं कुनै कन्जुस्याइँ बिना उसले कुनै कारण बिना मार्नेछ।
गौरनले धेरै नागरिक र सैनिक कर्मचारीहरूलाई मारेको छ, र ऊ पनि सोसुकेलाई मार्ने व्यक्ति हुन चाहन्छ। उनलाई के गर्ने भनेर बताउन मन पराउँदैन, उनी अमलगामका केही सदस्यहरूलाई मार्ने क्रममा पनि देखा परेका थिए जसले उसलाई संकेत गरे। गौरोन पूर्ण मेटल पैनिक सीजन5मा हुने छैन।
उनी अमलगामको साथ साथै उच्च पदका सदस्य थिए गेट्स र लियोनार्ड टेस्टारोसा.
उप पात्रहरू - पूर्ण धातु Panic सीजन 5
पूर्ण मेटल पैनिकमा उप पात्रहरूले कथामा ठूलो भूमिका खेले। हामीले तल केहि थप यादगारहरू सूचीबद्ध गरेका छौं। ती सबै धेरै यादगार थिए जहाँसम्म म सम्झन सक्छु। तिनीहरू मध्ये धेरैले पूर्ण मेटल आतंकको 5th औं सत्रमा फिचर गर्दछन् तर हामीले पर्खनुपर्नेछ र पूर्ण मेटल पैनिक सीजन for को लागि हेर्नुपर्नेछ।
के यसले अर्को मौसम पाउनेछ? - पूर्ण धातु आतंक सीजन।
एनिमेज श्रृंखला पूर्ण धातु आतंकको लोकप्रियतालाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन। यो लगभग २० बर्ष को लागी गरीएको छ र अब बाहिर जाने कुनै स no्केत देखाउँदैन। त्यसोभए चिन्ता गर्नुपर्ने के त्यहाँ छ? तल केहि कारकहरू छन् जुन मौसममा निर्भर हुन्छ कि हुँदैन पूर्ण मेटल पैनिक सीजन 20 हुनेछ:
यदि Gonzo वा Xebec पूर्ण धातु Panic को अर्को सीजन उत्पादन गर्न इच्छुक छन् र पूर्ण धातु Panic सीजन will को माध्यम बाट जाने।
मौसम वा होईन पूर्ण मेटल पैनिक सीजन prof लाभदायक हुनेछ वा हुँदैन।
यो पूर्ण मेटल Panic सीजन take लिने समय लाग्नेछ।
यदि एक पूर्ण मेटल पैनिक सीजन worth यसको लायक हुन्छ वा हुँदैन (यो लोकप्रियताको कारण हुने छ)।
यदि मूल सामग्री मa्गा) पूरा गरीएको छ भने अर्को अनुकूलनको लागि अनुमति दिईएको छ र त्यसैले पूर्ण मेटल पैनिक सीजन।।
नयाँ मौसम कहिले हावा हुन्छ? - पूर्ण धातु आतंक सीजन।
हामी भन्छौ कि हामीले छलफल गरेका सबै चीजहरू दिएका छौं कि पूर्ण मेटल पैनिक सीजन5२०२० पछि कहिँ पनि प्रसारित हुनेछ। यो भाइरस र अन्य मुद्दाहरूको कारण पूर्व उत्पादन ढिलाइको कारणले हो।
हामी आशा गर्दछौं कि त्यो years बर्ष अब पर्खनु पर्दैन। आशा छ कि पूर्ण मेटल आतंकको नयाँ सत्र २०२२ मा बाहिर आउँनेछ तर हामी सँधै भन्छौं यो केहि प्रमाणको साथ अनुमान मात्र हो।
हामी भन्न चाहन्छौं कि फुल मेटल पैनिकको नयाँ सीजन बिभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेको हो र २ वर्ष अघि २०१2मा मात्र आयो।
निष्कर्ष - पूर्ण धातु आतंक सीजन 5
हामीले किन केही कारणहरू दिएका छौं किन हामी सोच्छौं कि पूर्ण मेटल पैनिक सीजन somewhat केही हदसम्म हामी हेर्न चाहन्छौं र भविष्यमा पनि हेर्छौं। त्यसोभए के हामी पूर्ण धातु आतंक सीजन get पाउनेछौं? ठिकै छ, म भन्छु संभावनाहरु राम्रो छन्। आशा छ कि हामी ठीक छौं र पूर्ण धातु आतंकको नयाँ सिजन टाढा छैन। मलाई मन पर्छ यदि एक नयाँ सीजन बाहिर आयो भने, म सबै पुरानोहरूलाई फेरि हेर्नेछु र नयाँहरू हेर्छु।
किनभने पूर्ण धातु आतंकले हामीलाई यसको हिटस भन्दा पहिले seतुहरू प्रदान गर्‍यो, यो लगानी पाउन र सबै मार्गहरू हेर्नको लागि यो एक उत्तम एनिमेस हो। यसको मतलव यो अझ राम्रो हुन्छ जब (आशा) पूर्ण धातु आतंकको नयाँ सिजन आउँछ। यो sis किनभने हामी आफूले छोडेको ठाउँबाट उठ्न सक्षम हुनेछौं, केही मलाई आफैले गर्न मन पराउँदछ।
यदि तपाईंले यो लेखको आनन्द लिनुभयो र यो उपयोगी फेला पर्यो भने साझा गर्नुहोस् र साझा गर्नुहोस् र साथसाथ तपाईंको विचारहरू छोड्नुहोस्। यसको अर्थ धेरै हुन्छ। तपाईं तल हाम्रा अन्य समान लेखहरू पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूमध्ये केही म द्वारा लेखिएका थिए।
टैग: animefullmetalpanicanim fillmetalpanics season5 fullmetalpanicanime fullmetalpanicfumofu फुलमेटलपानिक सिजन2फुलमेटलपानिक सिजन4fullmetalpanicseason5 article सिजन5पूर्ण धातु प्यानिक सिजन5पूर्ण धातु प्यानिक? Whendoesfullmetalpanicgetaseason5 कहिले हुनेछ पूर्ण धातुपानिक गेटासीजन5willfullmetalpanicgetasason5?
अघिल्लो प्रविष्टि एउटा मौन आवाज २ - के यो सम्भव छ?
अर्को प्रविष्टि रोजारियो भेम्पायर सीजन - - यो कहिले हुन्छ?